လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းထွက်နေတဲ့ စပွန်ဆာ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ အလှမယ် ထားထက်ထက် – Cele Lover
လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းထွက်နေတဲ့ စပွန်ဆာ ကိစ္စကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ အလှမယ် ထားထက်ထက်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ …မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ချောလေး ထားထက်ထက် ဟာဆိုရင် မော်ဒယ်လောက မှတစ်ဆင့် သရုပ်ဆောင်ဘက်သို့ကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ချစ်စရာဟန်ပန် အမူအယာလေး တွေကြောင့်ပရိတ်သတ်ရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်မင်းသမီချောလေးတစ်ယောက်ပဲ
ဖြစပါတယ်နော်။ဖေဖော်ဝါရီမှာ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီနောက် ပြည်သူတွေနှင့်ရပ်တည်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ၅၀၅ (က)ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံရသောကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ တော်လှန်ရေးအတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ သွားရောက်ဖို့ အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့တာ ဖြစ်
ပီး ဧပြီလကတည်းက တောထဲတွင် စစ်ပညာသင်ကြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းလေးကမှ ဖခင်တစ်ယောက်လုံးကို ဆုံးရှုံးထားရတာဖြစ်ပြီး ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ဆက်လျှောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ထားထက်ထက်က “ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာ လူသိရှင်
ကြားရှင်းရမယ့် ကိစ္စလို့ကို မထင်ပါဘူး…Sponsor ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတွက် ဒီစာစုကို လိပ်ပြာသန့်သန့် နဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်…၁၊ ကျွန်မတို့ အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ၄ နှစ် ကြာ ရည်းစား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…၂၊ ငွေကြေး ၊ တိုက်ခန်း ၊ ကား ၊ လက်ဝတ်ရတနာ စတဲ့ တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်း တခုမှ မယူခဲ့ဖူးပါ…၃၊ နှစ်ဖက်
သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် ၂၀၁၉ မှာ ကျွန်မဖက်ကနေပဲ စတင်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီး အေးအေးဆေးဆေး လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်…၄၊ ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ မိန်းမ တယောက်ကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ဖို့ အခြားနည်း မစဉ်းစားတတ်ကြတာ အံ့ဩပါတယ်…၅၊ အခုလို တိုက်ခိုက်ခြင်း အပေါ် ကျွန်မ မဟုတ်တာ မလုပ်ထားတဲ့ အတွက်
ကျွန်မ ရဲ့ လိပ်ပြာ သည် သန့်လျက် ၊ ကြည်လျက် ၊ လင်းလျက်…ထားထက်ထက်30 August 2021 ” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်.. ပရိသတ်ကြီးလည်း ထားထက်ထက်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားလေးကို အားပေးစကားပြောပေးသွားကြပါအုံးနော်.
Source: Htar Htet Htet
လူမႈကြန္ယက္မွာ သတင္းထြက္ေနတဲ့ စပြန္ဆာ ကိစၥကို ေျဖရွင္းလာတဲ့ အလွမယ္ ထားထက္ထက္
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ …ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး ေခ်ာေလး ထားထက္ထက္ ဟာဆိုရင္ ေမာ္ဒယ္ေလာက မွတစ္ဆင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ဘက္သို႔ကူးေျပာင္းလာခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ခ်စ္စရာဟန္ပန္ အမူအယာေလး ေတြေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ရဲ႕ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကို အျပည့္အဝ ရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္မင္းသမီေခ်ာေလးတစ္ေယာက္ပဲ
ျဖစပါတယ္ေနာ္။ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ၿပီေနာက္ ျပည္သူေတြႏွင့္ရပ္တည္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၅၀၅ (က)ျဖင့္အမႈဖြင့္ခံရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္ဖို႔ အခုလိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္
ပီး ဧၿပီလကတည္းက ေတာထဲတြင္ စစ္ပညာသင္ၾကားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းေလးကမွ ဖခင္တစ္ေယာက္လုံးကို ဆုံးရႈံးထားရတာျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ဆက္ေလွ်ာက္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ထားထက္ထက္က “ရည္းစားနဲ႔ ျပတ္တာ လူသိရွင္
ၾကားရွင္းရမယ့္ ကိစၥလို႔ကို မထင္ပါဘူး…Sponsor ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတြက္ ဒီစာစုကို လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ နဲ႔ ေရးလိုက္ပါတယ္…၁၊ ကြၽန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ၄ ႏွစ္ ၾကာ ရည္းစား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္…၂၊ ေငြေၾကး ၊ တိုက္ခန္း ၊ ကား ၊ လက္ဝတ္ရတနာ စတဲ့ တန္ဖိုးႀကီး လက္ေဆာင္ပစၥည္း တခုမွ မယူခဲ့ဖူးပါ…၃၊ ႏွစ္ဖက္
သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့ အတြက္ ၂၀၁၉ မွာ ကြၽန္မဖက္ကေနပဲ စတင္ခြင့္ေတာင္းခဲ့ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး လမ္းခြဲခဲ့ပါတယ္…၄၊ ဒီလိုေခတ္ႀကီးမွာ မိန္းမ တေယာက္ကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ အျခားနည္း မစဥ္းစားတတ္ၾကတာ အံ့ဩပါတယ္…၅၊ အခုလို တိုက္ခိုက္ျခင္း အေပၚ ကြၽန္မ မဟုတ္တာ မလုပ္ထားတဲ့ အတြက္
ကြၽန္မ ရဲ႕ လိပ္ျပာ သည္ သန္႔လ်က္ ၊ ၾကည္လ်က္ ၊ လင္းလ်က္…ထားထက္ထက္30 August 2021 ” ဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့ပါတယ္.. ပရိသတ္ႀကီးလည္း ထားထက္ထက္ရဲ႕ ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ထားေလးကို အားေပးစကားေျပာေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္.
Previous Article နီနီခင်ဇော်ရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် ပထမဆုံးမွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းပေလိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး
Next Article ကြည့်မိသူတိုင်းကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထသွားစေမယ့် တော်လှန်ရေးအငြိမ့် ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကို တင်ပေးလာတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့